အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ၊ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော ယာယီသမ်မတကွီး ဒူဝါလရ… – PVTV Myanmar
အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ၊ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော ယာယီသမ်မတကွီး ဒူဝါလရှီးလမှ ပွညျသူလူထုမြားသို့ လကျတလောဖွဈပျေါနသေညျ့ စဈရေး ပဋိပက်ခအခွအေနမြေားနှငျ့ပတျသကျပွီး အရေးပျေါပွောကွားသညျ့ မိနျ့ခှနျး
၂၀၂၁ ခုနှဈ စကျတငျဘာ ၇ ရကျ
Acting President of the National Unity Government, Republic of the Union of Myanmar, Duwa Lashi La’s Emergency Speech to the Public on Current Military Crisis
Like – 37K Share – 7550
2021-09-07 at 8:19 AM
Pu Sue says:
2021-09-07 at 8:25 AM
2021-09-07 at 8:37 AM
အဲအသံကွားခငျြနတော မကျြရညျ ပိုးပိုးပေါကျပေါကျ ကလြာအောငျ ပြျောတယျ့ဟေ့
2021-09-07 at 8:43 AM
အရေးတျောပုံ အောငျကို အောငျရမယျ ခှေးတှသေတိထားကွ
U Kyaw Thu Naing says:
2021-09-07 at 8:47 AM
Keep fighting! READY, Let’s go! 💪💪💪
2021-09-07 at 8:49 AM
Sawaung Sawaung says:
2021-09-07 at 9:00 AM
အရေး တျော ပုံ အောငျ ရမညျ
2021-09-07 at 9:24 AM
U Myo Naing says:
2021-09-07 at 9:25 AM
တရားဝငျ တျောလှနျခှငျ့ရသှားပွီဆိုတော့ ကရြာနရောက ဆျောကွစို့ ညီအကို မောငျနှမတို့ရေ၊အရေးတျောပုံ မုခအြောငျရမယျ၊တနျဘိုးရှိ့တဲ့ ငါတို့အသကျတှကေို တနျဘိုးရှိ့ရှိ့ပေးဆပျရငျ အသခေံတိုကျမယျ၊ငါတို့အားလုံးသညျ သူရဲကောငျးမြားဖွဈတယျ တရားသောစဈကို ရဲရငျ့ပွတျသားစှာ အနိုငျတိုကျကွပါစို့။👍👍👍
2021-09-07 at 9:27 AM
အရေးတော်ပုံ တော်လှန်ရေးမှာ ကျွန်တော် တို့တွေ Online social mediaပေါ်မှာ အားပေးနေရုံ သက်သက်နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အရင်လိုလူမှု့ နေထိုင်ရေး ဘဝတွေ ပြန်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Eaoတွေနဲ့ အတူလက်တွဲပါဝင်နေတဲ့ ညီအကို တွေကို တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှူဒါန်းပေးပါလို့ လေးလေးနက်နက်ထပ်လောင်း တောင်းဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ အရေးကြီးပါပြီ သွေးစည်း ညီညွှတ်ကျကြောင်း ပြသပေးကြပါ။
2021-09-07 at 9:42 AM
Ethan Ye says:
2021-09-07 at 9:45 AM
ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများဘေးကင်းပြီး အောင်ပွဲ များဆင်နိုင်ကြပါစေ စစ်အာဏာရှင်များ အပြီးတိုင် ချုပ်ငြိမ်းကျဆုံးပါစေ ပြည်သူကို ရက်စက်ယုတ်မာသူများ အားလုံး အမြစ်ပျက်ကျဆုံး ရှုံးနိမ့် ကျပါစေ ဘဝအဆက်ဆက် ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်း ဒုက္ခဆိုး နဲ့သာကြုံရပါစေ ပြည်သူတွေ ရဲ့ အဓိက ပန်းတိုင် ဒီမိုကေရစီ အမြန်ဆုံး ရှင်သန်အောင်မြင်ပါစေ ပြု ပြု ခဲ့သမ်ွ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အလုံးစုံကို တိုင်တည် သစ္စာ ဆိုပါသည် 🙏🙏🙏
၉:၃၀ AM (7.9.21)
ဓမ္မ​စေတီလမ်း marketplace နားမှာ
ကန်တော့ ပွဲတင်​နေကြတဲ့ မြင်ကွင်းပါ
ThinYa NantTun says:
Poe Zarlay says:
2021-09-07 at 10:53 AM
ဒီနမှေ့ာပဲ တိုငျတိုကျဆိုငျဆိုငျ နလေ ထီးဆောငျးပါတယျ..ဘေးကလညျး သကျတနျ့ရောငျစုံပါ…အရမျးထူးပါတယျ…အရေးတျောပုံအောငျရမညျ..
ဝန်း ဝါဝါ says:
2021-09-07 at 11:05 AM
Mg Thict says:
2021-09-07 at 11:25 AM
2021-09-07 at 12:50 PM
တွယ်ဖို့ယာ အရန်သင့် ခွထားပီသာဘဲ
2021-09-07 at 12:56 PM
nug. က dday ကို လေနဲ့ကြေညာနေတာ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဘာတခုမှ လုပ်ပေးထားတာမရှိ
တောထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ pdf တွေဆိုတာ အစာစားရဖို့တောင်အနိုင်နိုင် ရုန်းကန်နေရသူတွေ
ပုံရိုက်ချင်ရင် KNU ရဲဘော်တွေဆီက သေနတ်ငှားပီး ရိုက်ရတဲ့အဆင့်ပါ
ဘယ် pdf ကိုမှ လက်နက်တခုမှ ထုတ်မပေးထားပါ
သင်တန်းလေး တပတ် တလလောက်တက်ပီးရင် အတင်းပြန်မယ့်လုပ်တဲ့သူကြည့်ပဲ….
မပြန်ရဲလို့ ကျန်နေသူတွေက ဒုက္ခသည်အဆင့်သာရှိ
D Day ကြေညာတဲ့ NUG အဖွဲ့ကို နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်လက်နက်ကိုင် တိုက်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက ဟားတိုက်ရယ်နေကြပြီ 😂
ဘယ်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကမှ NUG ကို ခေါင်းထဲမထည့်ကြပါ…
Po Chit Chit says:
အမစေုတို့ ဉီးဆောငျတဲ့ NUG
အစိုးရ နဲ့ PDF နိူငျကိုနိူငျရမညျ
2021-09-07 at 1:11 PM
Shalom! Hello look at me! I’m ready to start D- day and ro fight for the right together with Jesus till the end and Win the battle!
Ye Thiha Aung says:
2021-09-07 at 10:16 PM
Hein Khant ညီလေး သခြောနားထောငျ
2021-09-30 at 11:35 PM
PVTV ၏ သတငျးကဏ်ဍ (၆ စကျတငျဘာလ ၂၀၂၁)…